चितवनमा कोरोना रोक्न गठित समिति भित्र घिनलाग्दो राजनीति - Purbeli News
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र १६, २०७६ समय: १६:३९:३८
चितवन / विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मानव समुदाय त्रसित र आतंकित छ । यस्तो महामारीका बेलामा सबै जात, धर्म, समुदाय, राजनीतिक दल, चिकित्सक, नागरिक समाज एवम् सराकोरवाला सबै निकाय एक ढिक्का भएर विपतको सामाना गर्नुपर्दछ । तर, कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध लड्न आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने भनेर चितवनमा गठन गरिएको समिति भित्र घिनलाग्दो राजनीति सुरु भएको छ । चैत १४ गते प्रदेश सांसद विजय सुवेदीको संयोजकत्वमा जिल्लामा सबै स्थानीय तहका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ब्यापारीक संघसंस्थाका प्रमुख तथा चिकित्सकहरुसमेत रहने गरि गठन गरिएको कोरोना रोग विरुद्ध जिल्ला समन्वय समिति बन्यो ।
तर, यो समिति गठन भएको चौविस घण्टा पनि नबित्दैं यसलाई विवादमा ल्याउने काम भएको छ । संकटका बेलामा समेत राजनीतिक दल भित्र कतिसम्म घृणित काम हुन्छ भन्ने दृष्टान्त चितवनमा देखिएको छ । समितिको पहिलो बैंठकमा नै विवाद हुँदा यसले भोलीका दिनमा कसरी काम गर्ला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । शनिवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा आब्हान गरिएको बैंठकमा राजनीतिक दल भित्रको खिचातानी देखियो ।
समितिको सदस्यसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले समितिको बैठक रोकेर केही कुरा मिलाउनुपर्ने बताउँदै पन्छिए । उनले सरकारका केही निर्देशनहरु आउने भन्दैं पर्खिनुपर्ने बताए पनि उनलाई समिति विघठन गर्न जिल्लाका सांसदहरुले दवाव दिएका छन् । कुनै एक व्यक्तिलाई हिरो बनाउन समिति बनाएको भन्दैं त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने मागका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी दवावमा परेका छन् ।
खास के हो विवाद ?
चितवन क्षेत्र नं. २ ख का प्रदेश सांसद बिजय सुवेदी भरतपुर अस्पतालका पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा केही जानेका र चिकित्सकहरुसँग पनि नजिकको सम्वन्ध भएका कारण उनलाई चिकित्सक र भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालको अनुरोधमा समितिको संयोजक बनाइएको थियो । गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा आयोजना गरिएको धनधान्याञ्चल महायज्ञको नेतृत्व लिएर सफल पारेकोले उनलाई संयोजक बनाउन सबै सहमत देखिए । चैत्र १४ गते बसेको सर्वपक्षिय बैठकले उनलाई संयोजक बनाएर जाने निर्णय मात्रैं गरेन, भरतपुर कोरोना विषेश अस्पताललाई भरतपुर अस्पताल मातहत राख्ने निर्णय पनि भयो । सोही दिन रातीबाट सुरू भयो संकटका बेलामा समेत राजनीतिको घिनलाग्दो खेल ।
चितवन क्षेत्र नं. २ सांसद एवम् नेकपा जिल्ला सचिव कृष्णभक्त पोखरेल, अर्का नेकपाका प्रदेश सांसद कृष्ण खनालले, सुवेदी संयोजक बनेकोमा, मेयर रेनु दाहाल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराई माथि दवाव बढाए । जवकी सुवेदीलाई संयोजक बनाउने निर्णय गर्दा पोखेरेल आफैं बैठकमा उपस्थित थिए । उनी समितिको सल्लाहाकार समिति संयोजक हुन् । सांसद पोखरेलले राजनीतिक र सामाजिक अभियानमा सफल सुवेदी फेरी हिरो हुने डरले संकटका बेलामा समेत घिनलाग्दो राजनीतिक गरेका हुन् । पोखरेलले अहिले आफूखुसी समितिको नाम र लिष्ट खल्तीमा बोकेर हिडेका छन् ।
पोखरेल र खनालले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा समिति नबनाएको, पूर्वी चितवनलाई वेवास्ता गरेको जस्ता बिषय उठाएर खोचे थापेका छन् । तर, यसमा सत्यता छैन । सुवेदी नेतृत्वको समिति भित्र माडी नगरपालिका प्रमुखदेखि पूर्वी चितवनका चारवटै नगरपालिका प्रमुखहरु समेत छन् । स्वंय जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण डल्लाकोटीसमेत समितिमा छन् ।
डल्लाकोटी, गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण सहयोग समितिको जिल्ला संयोजक हुन् । तर उनले फिटिक्कै काम नगर्दा महानगर प्रमुख रेनु दाहालसहित धुर्मस सुन्तली फाउण्डेशनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु आजित छन् । संकटको बेलामा मिलेर जानुपर्नेमा नेकपा भित्रको घिनलाग्दो गुट सक्रिय हुँदा समितिले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने र महामारी फैलिएमा सहि व्यवस्थापन नहुने चिन्ता देखिएको छ । कोरोना अस्पतालमा कहिल्यै नझुकिल्ने अनुहारहरु समितिलाई विवादमा तानेर संकटमा रमिते बन्न खोजेको प्रतित हुन्छ ।